५ जना महिलाहरु मिलेर अर्की १ महिलालाई यसरी कुʼटीकुʼ टी गरे… [भिडियो सहित]
March 19, 2020 5035
भक्तपुरमा एक महिला केही दिन अघिमात्र भाडा’मा बस्न आएकी थिइन् । उनको एक छो’रा वाहेक परिवा’रको अरु सदस्य भएको छिमेकी’लाई थाहा छैन । छोराको नाम’ अनिष राई र महिला’को नाम विम’ला राई हो । उनको छोरा दाईसंग पेन्टिगं’का काम गर्न वाहिर थिए ।
दाईको घरमै बस्ने उनको योज:ना थियो, तर दाईलाई फोन गरेर कसैले छोरालाई तत्का’ल पठा’इदिनु भनेपछि उनी घर आए । तर घर आउँदा झुन्डिʼए’को अवस्थामा उनको आमा’को नि’ध न भइसकेको थियो ।
स्थानियका अनुसार केही छिमेकीहरु महि’लाहरुले कु ट पि ट गरेर हʼ त्या गरेको बताएका छन् ।आफु’लाई आमाले पनि दुई दिन पहिला फोन गरेर छिमेकी महिलाको घरमा कुकुर’ले मा’सु खाइदिएको बहाना’मा छिमेकी महिला’ले कु ट पि ट गरे भनेर फोन गरेकी थिइन् ।
तर त्यसको भोली’पल्ट नि धन भयो । अघिल्लो दिन पनि स्था’निय महिलाहरुले उन’लाई बाँ’धेर रा’खेको पनि आफुले थाहा पा’एको बताए ।घ’टना भएको थाहा पाएपछि पुगेका युट्युव’रहरुले प्रश्न सोधेर र्या’ख र्याख्ती पार्दा उनी बोल्नै सकेन’न् ।
जसले मेरो आमा’लाई यस्तो गरे उनीहरुलाई स’जाय दिनुपर्छ, उनले भने, बाहिरवाट चु,क्कुल लागेको छ भित्र मेरो आमा झुन्डि’एको अवस्थामा मृ त हुनु’हुनछ । यो घ टना को निष्पक्ष छान’विन हुनु’पर्छ । उनले सानैमा उन’को बुवाले पनि छो’डेर गएको बताए’का छन् ।
करिब ५ जना स्था’निय महिला मिलेर एक जना करिब ३५ वर्षकी महिलाको ज्यान लिएको घ ट’ना भक्तपुरमा सार्वज’निक भएको छ । घ ट ना मा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले केही महिला’लाई प’क्राउ गरेका छन् ।
एक जना महिलाले केही महि’लाले कु ट’पि ट गरेको पनि देखेको भिडि’योमा बताएकी छन् । एक जनालाई किन यति’का धेरै महिला मिलेर कुʼटेको भनेर आफुले सोध्दा यसले मुख छो’ड्यो भनेर जवाफ दिएको पनि ति महिला’ले बताएकी छन् ।
मृ’त हुनुभन्दा अगाडी आफु’ले घा’उमा तेल पनि लगाइ’दिएको बताए ।पहिला कु ट’पि ट भइसके’पछि उनले ति पी’डित महिला’लाई तानेर आफ्नो घरमा लगेको र तेल लगाइ’दिएको बताइन् । फेरी आफु सिलिण्डर लिन पसलमा गएको बेलामा उनलाई फेरी उनी माथि कु ट’पि ट भएको ति महिला’ले बताएकी छन् ।
भक्तपुरको मनोह’रा नजिकैको सुकुम्बासी बस्ती’मा भएको यो घ’टना ले अहिले मानवताको परा’काष्ट नाघेको देख्न सकिन्छ । पाँच’जना महिला मिलेर उनलाई पानी’को पाइपले पि’टेको भिडि’यो देख्न सकिन्छ । (धनकुटा खबरबाट)
Prevकोरियाले नेपाली कामदारको भिषा ३० दिन थप गर्न सक्ने
Nextहेर्नुहोस्: पेट मिची’मिची हसाउने ‘सक्किगोनि’ को २७ औं नयाँ भाग ( भिडियो)
घर बनाउन शुभ-साइतको पूजा गर्ने क्रममा पहि`रो झर्दा पुजारीकाे मृ`त्यु
आज थप १९ जनामा कोरोना भेटियो, कुन जिल्लामा कति? हेर्नुहोस्….
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81154)